Fumanisa ezona veki zothando zibalaseleyo | Iindaba Zokuhamba
Susana Garcia | | Indawo yokubaleka, Iindawo ezibalekayo eYurophu, ngokubanzi, Ezothando
Ukubaleka iintsuku ezimbalwa neqabane lakho Ngumbono olungileyo, ukukwazi ukonwabela ukubaleka kunye. Ukuba yile nto ufuna ukuyenza, qaphela uninzi lweempelaveki zothando onokuzenza. Zininzi iindawo ezifanelekileyo ukuhamba njengesibini, kwaye ezinye izimvo zilungele ukwenza ngesiqingatha sethu esingcono.
Si ufuna ezinye izimvo zokukukhuthaza Xa ucwangcisa ukubaleka kwezothando kunye neqabane lakho, qaphela ezi ndawo. Ngaphandle kwamathandabuzo, enye yazo inokugqibelela ukudala iinkumbulo ezintsha nezingenakulibaleka kuni nobabini.
1 Ungayikhetha njani eyona ndlela ifanelekileyo yokubaleka
Ungayikhetha njani eyona ndlela ifanelekileyo yokubaleka
Ngexesha le Cwangcisa ukubaleka neqabane lakho, into yokuqala ekufuneka siyicingile kukuthanda kokubini. Zininzi iindlela ezinokubakho zokuhamba ngeempelaveki, ke kuya kufuneka siqwalasele ezinye iindlela ezahlukeneyo. Kuyenzeka ukuba ukhethe phakathi kolwandle kunye nentaba, kuba elunxwemeni sinokonwabela ilanga elincinci kunye nasezintabeni usuku lokuhamba. Sinokukhetha phakathi kohambo lokubaleka okanye oluthe cwaka, kwispa. Enye into onokukhetha kuyo kukukhetha phakathi kwempelaveki kwindlu esemaphandleni okanye esixekweni. Lonke olu khetho luya kuxhomekeka kakhulu kukhetho lwabo bobabini.
Ukuba le nto siyifunayo yile ubalekela kwindawo enolwandle kunye nelanga, sineendawo ezifana neTenerife. Olubaleka luyinto yakudala, njengoko imozulu ihlala ilungile kwesi siqithi. Ukongeza, kwesi siqithi ungenza iihambo ezinkulu, ezinje ngelewa leengxilimbela. Kuyenzeka ukuba uthathe uhambo ngephenyane ukuya kubona ihlengesi kwaye unyuke uye kwiTeide edumileyo ngemoto yekhebula ukuze ube neembono ezilungileyo kwesi siqithi. Ukubaleka ngokupheleleyo okusinika into encinci kuyo yonke into.
Isixeko saseVenice yenye yezona ndawo ziphambili zothando zokubaleka, nangona impelaveki inokuba lixesha elincinci ukubona zonke iikona zesi sixeko. EVenice kubalulekile ukuhamba ngemijelo yayo kwaye ubone iindawo ezinje Ibhotwe likaDoge okanye iSt, Kunye Basilica yayo. Ukuba sihamba njengesibini, kufuneka singene phantsi kweBhulorho yabathandi kwaye sihambe ngeRialto Bridge yothando.
Uninzi lwezixeko zase-Italiya zilungele ukubaleka kwezothando, kwaye iRoma yenye yazo. Kule dolophu impelaveki ibonakala njengexesha elifutshane, kodwa ukuba ufuna ukwenza into yokubaleka inokuba yindawo yomlingo. Yenza umnqweno kwi Umthombo iTrevi, uhamba ngeColosseum enkulu, iVatican, ISt.Peter's Square okanye iVictoria Museums. Yisixeko esinomtsalane ekunzima ukusilinganisa, silungele abo bakonwabelayo ukuhamba ngembali.
Le yindawo yokubaleka yothando engathandabuzekiyo. Isixeko saseParis, kunye neekofu zayo ezincinci, iMyuziyam ye I-Louvre, i-Champs Elysees kunye ne-Eiffel Tower yindawo ebalulekileyo ekuyiwa kuyo. Enye yezinto ekufuneka uyenzile kukukhwela kwinqaba ukuze ubone iParis ephezulu, ngokufanelekileyo emva kobumnyama. I-Notre Dame Cathedral ayifanele iphoswe nayo.
Isixeko sase-Edinburgh kukwindawo entle yokubaleka. Jonga inqaba yayo endala, igcinwe kakuhle, ngeembono ezinkulu ngaphezulu kwesixeko, sesinye sezona zicwangciso zakhe zibalaseleyo. Kuyenzeka ukuba unyuke indawo yaseArthur Seat, intaba ebonelela ngeembono ezintle. Ukuba unako, kuya kufuneka uthathe indlela yokudlula kwezona nqaba zibalulekileyo eScotland kwaye usondele, ewe, eLoch Ness. IScotland inomtsalane omangalisayo, kodwa kufuneka sikhumbule ukuba kufuneka sinxibe ngokufudumeleyo, kuba imozulu iyabanda kuloo ndawo.
La Isixeko sasePortugal ngokugqwesa yindawo ye-bohemian okhethekileyo. Ukusondela kwisixeko apho unokuva khona ifado eyaziwayo sisicwangciso esihle sempelaveki. Olunye utyelelo oluza kwenziwa luhamba ngeTorre de Belem entle, iNqaba yeSan Jorge, iJonónos Monastery okanye iPlaza del Comercio. Siza kuchitha impelaveki ekhethekileyo ukufumanisa iindawo zaseBohemia ezinje ngeChiado.
Sithanda phantse zonke iidolophu zase-Italiya kuba kuninzi ukubona kwaye banezikhumbuzo ezintle kunye nezitalato, ukongeza kwimozulu yokuba ihlala ilungile. IMilan ilungile impelaveki, kuba akukho nto ibonakalayo kunezixeko ezinjengeRoma. Uxabisekile icahedral okanye i-duomo, iGalleria Vittorio Emanuele II okanye iSforzesco castle zezinye zezona zikhumbuzo ziphambili kunye notyelelo.
Esi sisixeko esihle kakhulu saseYurophu, ke oko kukhangeleka ngathi yinto efanelekileyo ukubheja kwimoto yempelaveki ebalekayo. Ukubona isixeko onakho udlule ngaphaya kweCharles Bridge. Ukongeza, kuya kufuneka ubone inqaba kunye nePrague Cathedral, izikhumbuzo ezibini ezintle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » ngokubanzi » Ezothando zempelaveki
Burj Khalifa, esalatha esibhakabhakeni